Israa'iil oo Faa'iido weyn ka heshay heshiiskii ay la gashay qaar kamid ah Wadamada Carabta
Thursday October 29, 2020 - 02:18:50 in Wararka by Editor Caynaba News
Maamulka Israa'iil ayaa heshiisyo lagu tilmaamay kuwa taariikhi ah la galay qaar kamid ah Wadamada Carabta, waxaana heshiisyadan
garwadeyn ka aheyd dowlada Mareykanka oo taageero balaaran siisa maamulka Israa’iil.
Ra’iisul Wasaaraha maamulka Israa’iil Benjamin Netanyahu ayaa sheegay in faa’iido ka dhaxleyn heshiisyada ay la gaareen afar kamid ah wadamada Carabta, waxa uuna xusay in isbadal ku yimid duulimaadyada dibadda ee diyaaradaha Israa’iil.
Waxa uu sheegay Netanyahu in heshiisyada ay la galeen wadamada Carbeed qaarkood meesha ka saartay xayiraadii dhinaca duulimaadka , waxa uuna xusay in ay wax ka bedelayaan khariidada sharraxeysa hawada ay maraan duulimaadyada.
Netanyahu ayaa sheegay in duulimaadyada mara hawada Sacuudiga, Baxreyn iyo Imaaraartka ay dan ugu jirto rakaabka ku wajahan Hindiya iyo dalal kale ee Aasiya maadama horraan ay bixin jireen kharsha badan iyo wakhti badan oo hawada lagu sii jiri jiray.
Maamulka Israa’iil ayaa heshiisyo la gashay Wadamada Imaaraadka ,Baxreyn iyo Sudan, waxaa sidoo kale dhawaan la filayaa in wadamo kale oo carbeed in heshiis la galaan maamulka Israa’iil.